जीवनमा आउने समस्याहरुको सतही कारण एवं मूल कारणहरुको उदाहरण
जीवनको अनेक पक्षहरुमा आउने समस्याहरुको आभासी एवं मूल कारणहरुको उदाहरण यहाँ दिएको छ । यो सबै उदाहरण वास्तविक जीवनको प्रकरण हुन्, जहाँ स्पिरिच्युअल साइन्स रिसर्च फाउण्डेशन (SSRF) ले पायो कि समस्याहरुको कारण आध्यात्मिक स्वरूपको छ ।
प्रायः हामी कारण गलत स्थानमा खोज्दछौं यस कारण समस्या कहीले पनि हट्दैन; किन कि समस्याको मूल कारण आध्यात्मिक स्वरूपको हुन्छ अनि केवल आध्यात्मिक स्रोतहरुले नै हटाउन सकिन्छ ।
१. व्यक्ति अथवा परिवारलार्इ प्रभावित गर्ने समस्याहरु
प्रकरण अध्ययन १ : वैवाहिक समस्या
प्रकरण अध्ययन २ : छातीमा वेदना
प्रकरण अध्ययन ३ : आर्थिक समस्या
प्रकरण अध्ययन ४ : लागूपदार्थको लत
प्रकरण अध्ययन ५ : दुर्घटनामा एउटा सानो नानीले आफ्नो आमा-बाबा गुमाउँछ
२. समाजलार्इ प्रभावित गर्ने समस्या
प्रकरण अध्ययन ६ : पाठशालामा हिंसा
प्रकरण अध्ययन ७ : प्राकृतिक आपदाको तीव्रतामा वृद्धि
यदि कुनै दम्पति वैवाहिक समस्याको कारण निराश छ अनि स्वयं त्यसलार्इ सुल्झाउन सकिरहेको छैन भने, उनी मनोविज्ञानमा डिग्री गरेको वैवाहिक सल्लाहकारबाट सल्लाह लिन सक्छ ।
असंतुलित वैवाहिक जीवनको आध्यात्मिक कारण के हो ?
पितृदोष अर्थात मृत पूर्वज वैवाहिक जीवन असंतुलित गर्न सक्छ, जसले निराशा उत्पन्न हुन्छ । अतः निराशाको मूल कारण हो पूर्वजको सूक्ष्म-देह द्वारा उत्पन्न समस्या । यसको माध्यमबाट पूर्वज हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ, जसले उनको मृत्युपछिको जीवनमा आउने समस्याहरु सुल्झाउन सहायताको रूपमा आध्यात्मिक दृष्टिले केही गरोस् ।
यदि हाम्रो छातीमा वेदना छ, भने हामीलार्इ परीक्षणको लागि एउटा लामो सूची सौंपि दिन्छ, जसमा इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम (ईसीजी), छातीको एक्स-रे, रक्तको जांच इत्यादि हुन्छन् । यदि यी परीक्षणहरुमा केही निक्लेन भने आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) भन्छ कि यो कार्डियाक न्यूरोसिसको प्रकरण हो अर्थात छातीको यस्तो वेदना जुन मानसिक कारणद्वारा उत्पन्न भएको हुन्छ ।
छातीमा वेदनाको मूल आध्यात्मिक कारण के हुन सक्छ ?
बार-बार छातीमा आउने यस्तो वेदना, जुन आधुनिक चिकित्सा द्वारा हटाउन सकिदैन त्यसको मूल कारण सामान्यतया आध्यात्मिक विश्वमा हुन सक्छ ।
यसको एउटा आध्यात्मिक कारण शरीरको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहमा बाधा पनि हुन सक्छ । यो बाधा सामान्यतया साधनाको अभाव वश हुन सक्छ ।
आर्थिक समस्याले घेरेको कुनै व्यक्ति कर्मचारिको दुर्बल प्रदर्शनको कारण व्यवसायमा भएको ठूलो घाटालार्इ यो कारण मानेर कुनै परामर्शदाताद्वारा सहायता माग्न सक्छ ।
कर्मचारिको दुर्बल प्रदर्शनको के आध्यात्मिक कारण हुन सक्छ ?
कारखानाको परिसरमा कष्टदायी शक्तिको कारण सर्वश्रेष्ठ प्रयास पछि पनि व्यवसायमा अतार्किक (unreasonable) घाटा हुन सक्छ ।
कुनै पनि भवनमा एउटा शक्ति रहन्छ । भवन-निर्माण तथा फर्नीचर एवं उपकरण राख्ने स्थानको कारण त्यसमा नकारात्मक स्पन्दन उत्पन्न हुन सक्छ जसको परिणामस्वरूप कर्मचारिको कार्यक्षमता घट्न सक्छ एवं उनीहरु बीच अनबन हुन सक्छन् ।
केही प्रकरणमा हामी देख्छौं कि व्यक्तिलार्इ नशाको लत लाग्छ – तर त्यो नशाको लत किन बस्न जान्छ ?- व्यसनमुक्ति केन्द्र यसलार्इ निराशा अथवा व्यक्तित्त्व सम्बन्धी समस्यासँग जोडेर हेर्दछन् ।
आध्यात्मिक अनुसन्धानमा यो पाएको छ कि व्यसनको सबै प्रकरणमा, व्यसनको मूल कारण कुनै व्यसनको लिंगदेह अथवा भूतद्वारा आवेशित भएको पाएको छ ।
कहीले काही हामी देख्छौं कि जीवन हाम्रो साथ अन्याय गरिरहको छन् – एउटा सानो नानी अनाथ हुन जान्छ किन कि एउटा दुर्घटनामा उनको आमा-बाबले उनलार्इ छोडेर जान्छ । लोग यस्तो घटनाको कारण जान्न चाहन्छ – यो मेरो साथ नै किन भयो ? – मैले त्यस्तो के गरेको थियो, जसले मलार्इ यस्तो मिल्यो ? अधिकांशतया हाम्रो आसपासको लोग हामीलार्इ कुनै उत्तर दिन सक्दैन । ज्यादा भन्दा ज्यादा हामी त्यस सानो नाननीलार्इ त्यस घटनाबाट बाहिर आउनमा सहायता गर्न सक्छौं अनि यो सुनिश्चित गर्न सक्छौं कि उनीलार्इ एउटा राम्रो अनाथाश्रम मिलोस् ।
हाम्रो जीवन पथ निर्धारित गर्नमा प्रारब्ध एउटा सशक्त घटक हो । यो हाम्रो जीवनको त्यो भाग हो, जुन हाम्रो बसमा हुँदैन । यहाँसम्म कि हाम्रो जीवनको सबै महत्त्वपूर्ण घटना जस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह एवं ठूलो दुर्घटना पूर्व-निर्धारित हुन्छन् ।
कृपया पढ्नुहोस् लेख “प्रारब्ध अनि क्रियमाणकर्म के हो?”
ती समस्याहरुको बारेमा के जस्ले पूरै समाज प्रभावित हुन्छ, यसको के कारण छ अनि त्यसलार्इ सुलझाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं ?
उदाहरणको लागि पाठशालामा हिंसाको बढ्दो घटना ! हामी यो भन्न सक्छौं कि आदर अनि सहनशीलताको अभाववश यो भर्इ रहेको छ अनि यसको अनेक उपायहरु मध्ये एउटा यो पनि हुन सक्छ हामी बालबालीकालार्इ एक-अर्कालार्इ सम्मान गर्न अनि सहनशील आचाण गर्न सिकाउने ।
सामाजिक स्तरमा जब धर्मको पतन हुन्छ तब हाम्रो बालबालीकाको आचरणमा झल्किन्छ ।
जगद्गुरु आदिशंकराचार्य ज्यूले धर्मको परिभाषित गर्दै भन्नु भएको छ, जुन निम्नलिखित तीन कार्य गर्छ :
समाजव्यवस्था उत्तम बनाइ राख्ने
प्रत्येक प्राणिमात्रको सांसारिक उन्नति गर्ने
उनको पारलौकिक (आध्यात्मिक आयामको) उन्नति गर्ने
जब कुनै प्राकृतिक आपदा आउँछ, जस्तै सुनामी अथवा बाढी जसले नगरलार्इ बगाएर लैजान्छ तब हामी अनेक भौगोलिक कारणहरुलार्इ त्यसको जनक मान्छौं । भूगर्भशास्त्री अनेक वर्ष अनि करोडौं रुपए आउने प्राकृतिक आपदा जान्न अनि त्यसको रोकथाममा व्यय गर्छ, तर त्यको कुनै फार्इदा हुँदैन ।
आज जब हामी कुनै समाचार पढ्छौं/सुन्छौं, तब पूर्णतया मानवतामा भर्इ रहेको आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, बाढी, भूकम्प अनि महामारिले भरेको रहन्छ ।
यसको बढ्दो संख्याको मुख्य कारण वास्तवमा आध्यात्मिक आयाममा हुन्छ । भौतिक घटक जस्तौ ग्रीन हाऊस गैसेसको सहभाग केवल ३० प्रतिशत छ ।
पूरै विश्वमा भर्इ रहेको रज-तम घटकको वृद्धि, हाम्रो घरमा थुप्रिएको धूलो अनि फोहर जस्तौ हो । प्राकृतिक आपदा, युद्ध अनि महामारीमा भर्इरहेको वृद्धि पृथ्वीलार्इ शुद्ध गर्ने प्रकृतिको पद्धति हो ।
प्राकृतिक आपदाको बढ्दो तीव्रता यस विषयमा हाम्रो लेखमा यसका कारणहरु विस्तृत रुपमा बताएकाछौं ।
संक्षेपमा SSRF ले यो खोजेको छ कि हाम्रो सामान्य दैनिक जीवनमा आउने अनेक समस्याको मूल कारण आध्यात्मिक विश्वमा हुने सम्भावना अधिक छ । यो समस्या एउटा सामान्य छालामा फोका आउने देखि खराब निर्णय जसले जीवन भरी प्रभाव पारि रहनेसम्म कुनै पनि हुन सक्छ ।
हाम्रो आगामी लेखमा हामी अध्यात्मिक विश्वसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरुको मूल कारण अनि त्यसको हामीमा सम्भावित परिणाम यस विषयलार्इ सम्क्षेपमा जान्नेछौं ।